China Vermiculite fekitori nemugadziri | Lingshou
Vermiculite imhando yemaminerari akaiswa ayo ane Mg uye anogadzirisa kechipiri kubva ku hydrate aluminium silices. Iyo inowanzogadzirwa neyemamiriro ekunze kana hydrothermal shanduko ye biotite kana phlogopite. Yakakamurwa nematanho, vermiculite inogona kukamurwa kuva isina kuzivikanwa vermiculite uye yakawedzerwa vermiculite. Yakakamurwa neruvara, inogona kukamurwa kuita goridhe nesirivheri (nyanga dzenzou). Vermiculite ine zvinhu zvakanakisa zvakadai sekupisa kupisa, kudzivirira kutonhora, kupesana nehutachiona, kudzivirira moto, kunyorwa kwemvura uye kunyorova, nezvimwewo pakabikwa kwemaminitsi 0.5 ~ 1,0 pasi pe800 ~ 1000 ℃, huwandu hwayo hunogona kukurumidza kukurumidza ne8 kusvika ku15. nguva, anosvika makumi matatu nguva, nemuvara wakashandurwa kuita goridhe kana sirivheri, kugadzira yakasarudzika-yakarongedzwa vermiculite isiri anti-acid uye isina kunaka mukushanda kwemagetsi. Vermiculite mushure mekuwedzera kwekuita ichaita pane yakasarudzika chimiro, nehukuru hwacho hunowanzove 100-200kg / m³ (Nekuda kwehukuru hwehuwandu hwekuwedzeredzwa vermiculite, mutengo wekufambisa unenge wakakura kwazvo, saka vermiculite inotumirwa kazhinji inowanzova mhando dzeisina kufananidzwa) .
Crude vermiculite madimikira: 0.15-0.5mm, 0.5-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-6mm, 4-8mm, 8-16mm.
Zvepanyama uye Chemical Properties yeVermiculite
Nekuda kwekusiyana kwemadhigree e hydration uye oxidation, makemikari zvimiro zve vermiculite hazvina kufanana. Mhando yemakemikari ye vermiculite ndeye: Mg x (H2O) (Mg3-x) (ALSiO3O10) (OH2)
Zviri mukati (%)
Mukurima, vermiculite inogona kushandiswa sevhu mamiriro, nekuda kwekushandurwa kwayo kwekaseji uye kutora, kugadzirisa mamiriro evhu, kuchengetwa kwemvura uye unyoro hwevhu, kuvandudza ivhu rekuwanika uye mvura yemukati, ita acidic ivhu rishandure muvhu risingapindiki; vermiculite inogonawo kuitawo dhiri dhizaini, ichikanganisa shanduko yekukurumidza kukosha kwePH, ita kuti fetiraiza iburitswe zvishoma nezvishoma mukukura kwezvirimwa, uye bvumira kushandisa zvishoma fetiraiza mufetera yekudyara asi isiri inokuvadza. Vermiculite inogona zvakare kupihwa kune iyo zviyo pachayo iine K, Mg, Ca, Fe, uye inoteedzera huwandu hwezvinhu zveCu, Zu. Semafuta Iyo miedzo yakaratidza: isa 0.5-1% yakawedzera vermiculite yakasanganiswa mukuumbwa, gonesa goho rezvirimwa ne15-20%.
Mukudiridza gadheni, vermiculite inogona kushandiswa kumaruva, miriwo, kurimwa kwemichero, kubereka uye zvimwe zvinhu, kuwedzera pakuumba ivhu nevadzoreri, asiwo kune tsika isina ivhu. Kana dziri hukama hwekudya huswa-midzi yekudyara miti yakatemwa uye yekutengesa mbeu, iri mukana wekutakura uye kutakura kwezvirimwa. Vermiculite inogona kusimudzira zvinobudirira kukura kwemidzi yembeu uye kukura kwembeu, inogona kupa mvura uye hutano hwezvirimwa zvinokura kwenguva yakareba, uye zvinoita kuti midzi yekudziya irambe yakagadzikana. Vermiculite inogona kuita kuti chirimwa chiwane mvura yakakwana uye mineral pane yekutanga nhanho, kukurudzira zvirimwa kuti zvikure nekukurumidza, uye nekuwedzera chigadzirwa.
Yakawedzera vermiculite, yakarongedzwa padenga, ichairidza yakanakisa kupisa kupisa simba, ichiita kuti chivakwa chigadzire munguva yechando uye inotonhorera muzhizha. Kushandisa vermiculite zvidhinha mukati mechikamu chekumusoro chekukwira kana kushandisa vermiculite zvidhinha semidziyo yekuisa mumahotera kana nzvimbo dzevaraidzo, mhedzisiro yekunzwa inzwi, chiratidzo chemoto, kuchengetedza kupisa uye zvichingodaro zvicharatidzirwa zvizere uye chivakwa chacho chicharembedzerwa mutoro waro. .
Mhepo diki yemhepo compartments mafomu mushure mekuwedzera kwe vermiculite, ichigonesa iyo vermiculite yakawedzera kuva porous ruzha rwekuisa izwi. Kana iyo frequency iri 2000C / S, huwandu-hunobata mutsindo we 5mm gobvu vermiculite is 63%, 6mm 84% uye 8mm 90%.
Vermiculite yakakura mukudzivisa chando senge kugona kwayo uye simba rinoramba rakafanana kunyangwe rapfuura nemakumi mana enguva yeyakaomesesa-thaw kutenderera kunoedzwa pasi -20 ℃. Iyo ine porous uye ine hupfumi midziyo. Inogona kuchengetedza kupisa uye kudzivirira kudzokorora. Kunze kwezvo, inogona kutora radiation rays, saka vermiculite mabhodhi anogona kuiswa mukati mevherabhoritari kutsiva inodhura inotungamira mapuranga kuti atore kusvika 90% yemarangi akapararira. 65mm gobvu vermiculite yakaenzana ne 1mm gobvu rinotungamira bhodhi.
Yakawedzera vermiculite poda yakagadzirwa ne vermiculite ore, yakaverengerwa pane yakanyanya kupisa, yekutarisa, yekukuya. Mitsara mikuru ndeiyi: 3-8mm, 1-3mm, 10-20mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 60mesh, 200mesh, 325mesh, 1250mesh. Kunyoreredza: dzimba dzekuvharira dzimba, mudziyo wekufambisa firiji, mota inofambisa, inochengeterwa uye inochengeterwa pombi yakafambiswa, boiler inochengetedza zvipfeko zvekupisa, manera esimbi, firebrick insulation simenti, mota dzemagetsi ekufambisa, michina yekuisa ndege, kutonhora chengetedzo yekushandisa. zvishandiso zvekuisa, madziro emadziro emvura ekushambadzira tangi, kusimudzira simbi, kuchenesa moto, mafirita, kuchengetedza zvinotonhora, linoleum, marata ekuisa, cornices, dielectric masango board, kudhinda kwepepa remadziro, kushambadzira kwekunze, pendi, kuwedzera kuvonekwa kwemoto, pikicha yakapfava huni moto. bepa remoto kadhi kadhi, yegoridhe neingi yendarira, pendi kunze ekunze.
Inotevera: Ruvara Flake
Composite Ruvara Flake 560